Iindaba -Ukusetyenziswa kwe-elektroniki kunye ne-optical defog in cctv long range zoom lens
Ukusetyenziswa kwe-elektroniki kunye ne-optical defog kwi-cctv ye-lens ende zoom lens
Zimbini iintlobo zetekhnoloji ye defog.
Ngokubanzi, ukukhanya okubonakalayo okungama-770 ~ 390nm akunakudlula kwinkungu, nangona kunjalo, i-infrared ingadlula kwinkungu, kuba infrared inobude obude obude kunokukhanya okubonakalayo, okunefuthe lokuphambuka ngokucacileyo. Lo mgaqo usetyenziswa kwi-optical defog, kwaye isekwe kwiilensi ezikhethekileyo kunye nefilitha, ukuze isivamvo sikwazi ukubona kufutshane ne-infrared (780 ~ 1000nm), kwaye siphucule ukucaca komfanekiso ovela kumthombo ngokubonakalayo.
Kodwa ngenxa yokuba i-infrared kukukhanya okungabonakaliyo, kungaphaya kobubanzi be-chip yokulungisa umfanekiso, ke ngumfanekiso omnyama nomhlophe kuphela onokufunyanwa.
Ukusilela kwe-elektroniki kukusetyenziswa kwemifanekiso eqingqiweyo yokulungisa umfanekiso. Kukho ukumiliselwa okuphindaphindiweyo kwe-elektroniki-defog.
Umzekelo, ii-algorithms ezingezizo ezomzekelo zisetyenziselwa ukuphucula umahluko womfanekiso, ngaloo ndlela kuphuculwe ukuqonda okubonwayo. Ukongeza, kukho imodeli esekwe kwimodeli yokubuyisela umfanekiso, efunda oonobangela bemodeli yokukhanya kunye nokuthotywa komfanekiso, imodeli yenkqubo yokuthotywa, kunye nokusebenzisa ukuguquguquka okungagungqiyo ekugqibeleni ukubuyisela umfanekiso. Iziphumo ze-elektroniki-defog zibalulekile, kuba kwiimeko ezininzi unobangela wobuzaza bomfanekiso unxulumene nokusonjululwa kwelensi ngokwayo kunye nomfanekiso wokulungiswa kwealgorithm ukongeza kwinkungu.
Ukuphuhliswa kwetekhnoloji ye-defog
Kwangoko ngo-2012, imodyuli yekhamera yebhloko yokusondeza ibhloko ye-SC120 eqaliswe nguHitachi inomsebenzi wokhuseleko. Kungekudala, uSony, uDahua, uHivision, njl. Naye ukwazile iimveliso ezifanayo nge-elektroniki-defog. Emva kweminyaka eliqela yophuhliso, iteknoloji ye-elektroniki-defog iye yakhula ngokuthe ngcembe. Kwiminyaka yakutshanje, abavelisi bamalensi babambisene ngokunzulu kunye nabavelisi bekhamera, kwaye balandelelana ngokulandelelana ngeemveliso ze-optical-defog.
Isisombululo ngokujonga uSheen
I-Viewsheen isungule uthotho lwemodyuli yekhamera yokusondeza exhotyiswe nge-standard defog ephezulu (i-optical + ye-elektroniki). Ukuze ufumane owona msebenzi ulungileyo we-defog. Indlela ye-elektroniki + ye-elektroniki isetyenziselwa ukwandisa ukusuka kumthombo wokukhanya ukuya kulungiso lwasemva kokuphela. Umthombo we-optical kufuneka uvumele ukukhanya okungaphezulu kwe-infrared ukuba kudlule kuwo, ke ilensi enkulu yokuvula, inzwa enkulu kunye nefilitha enefuthe lokuchasana nokubonisa okuhle kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngokubanzi. Ialgorithm kufuneka isekwe kwizinto ezinje ngomgama wento kunye nokuqina kwenkungu, kwaye ukhethe inqanaba le-defog, ukunciphisa ingxolo ebangelwe kukuqhutywa kwemifanekiso.